I-Ultrasonics yamafutha, igesi namafutha avuselelekayo - Hielscher Ultrasound Technology
Izintengo zikawoyela kanye negesi lokushisa kanye nokusimama kwemithombo yamapayipi yaba yindawo ebaluleke kakhulu kulowo mafutha & imboni yegesi. Amadivaysi ama-ultrasonic ase-Hielscher asetshenziselwa izindawo zokucwaninga futhi asetshenziselwa izitshalo zezicelo eziningi.
Amadivayisi we-ultrasonic eyenziwe yi-Hielscher asetshenziselwa izinqubo eziningi, njengokuxuba, Ukuhlakazeka, I-homogenizing nokuqothula ama-powders abe ngamanzi, kanye ne-the ukukhiqizwa kwe-emulsions ezinzile. Lokhu kuguquguquka kuvula izinhlelo eziningi ekukhiqizeni amafutha. Funda ukuze uthole ukuthi kungenzeka yini ukuthi i-ultrasonics ikwazi ukuthola amakhemikhali angasetshenziswayo.
Ukwethula amanzi ekushiseni kwamafutha kuye kwafakazelwa ukwehlisa i-NOx ukukhishwa. Amanzi afakwe emotshweni aphansi ekushiseni okushisa ngenxa yokuphuma kwamanzi. Lapho amanzi ephuphuma, uphethilozi ozungezile uphefumulelwe futhi-uhlanganisa indawo ebusayo. I-emulsification ye-ultrasonic iyindlela ephumelelayo yokwenza ama-emulsions amafutha amancane / amancane.
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana nokunciphisa i-NOx usebenzisa i-ultrasonication!
Enye indlela entsha yokwenza i-hydrodesulfurization yi-desulfurization esebenzayo e-ultrasonically. Amazinga okushisa asezingeni eliphezulu aphuma ku-cavitation e-ultrasonic ashintshela ama-reaction reaction kinetics we-process deulfurization. Lo mphumela uvumela okunye okunye – engabizi kakhulu – izidakamizwa noma amakhemikhali okuzulazula okunye okumele asetshenziswe.
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana ne-Sonochemical Desulfurization!
I-Biodiesel iyiphethiloli evuselelwa – okunye okunye okushiwo yi-diesel fuel eyenziwe nge-petroleum. I-biodiesel yenziwa ukudluliselwa kwamanzi emithonjeni, njengamafutha yemifino, amafutha algae, amafutha wezilwane noma amafutha. Ukukhiqizwa kwe-biodiesel kuhilela ukusabela okubangelwa utshwala. Ukuxuba ama-ultrasonic wamafutha, amafutha noma amafutha ngotshwala kuthuthukisa ijubane lokuphendula futhi likhiqize kakhulu. Lokhu kunciphisa izindleko zokutshalwa kwezimali nokusebenza.
Ukucubungula imfucuza yemvelo, i-sludge ye-ewage, i-muck kanye nomquba kumanyolo we-aerobic noma we-anaerobic ukuguqula izinto eziphilayo zibe yi-biogas. I-Ultrasonic ukuhlukaniswa kwezinto eziphilayo ngaphambi kokugaya kungashintsha isakhiwo sezinto ezibonakalayo, futhi kukhishwa futhi kusebenze ama-enzyme. Lokhu kuthuthukisa ukugaya kwezinto eziphilayo eziholela ekucubungulweni okusheshayo, ngaphezulu kwegesi kanye ne-sludge encane. Lokhu kukhulisa amandla omgogodla okhona futhi kunciphisa izindleko zokulahla.
Sicela usebenzise ifomu elingezansi, uma ufisa ukucela ulwazi olwengeziwe mayelana nokusetshenziswa kwe-ultrasound ekwenzeni kwamafutha.